Dummies: Ntughari maka ezumike nke anyị! | Martech Zone
Izu gara aga e nwere Indy Christian Geeks nri ehihie na m ụlọ ahịa kọfị kacha amasị. N'oge nri ehihie, enwere m onyinye pụrụ iche enyere site na ndị ezigbo mmadụ na Wiley na-ekwusara (nakwa ebe a na Indianapolis!). The ụmụ okorobịa nwere ụfọdụ fun fun snapping ụfọdụ foto na-ebugote ha Twitter n'ime nkeji na oké aha dị ka, “Ihe Nzuzo dị!”.
Na-egwu egwu, Wiley nwere mmetụta dị ịtụnanya na ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ na Ugbo ika. Site n’ịkwakọba akwụkwọ na ịkpọ aha n’ezoghị ọnụ Maka DummiesHa mechara merie nchegbu ndị mmadụ na-enwe n’ihe ndị ha dere banyere ha. Dummies nwere ihe karịrị nde akwụkwọ 150 na mbipụta na ihe karịrị utu aha 1,400. Dummies bụ akara ngosi kacha mma n'ụwa.
Ddị Dummies anaghị akwụsị na njirimara styles ụdị ederede akwụkwọ ndị ahụ na-akparịta ụka, na-agbanwe agbanwe ma na-akasi obi. Enwere ike ịsụgharị akwụkwọ ndị ahụ iji chọta ndepụta nyocha ziri ezi, ma ọ bụ gụọ site na mkpuchi ruo na mkpuchi. N'ikwu okwu na Wiley, ha enwetala akwụkwọ ahụ na sayensị!
Agwara m Kyle Nwachukwu, onye edemede nke Dummies Twitter Marketing maka Dummies na ọ sịrị na ọ bụ ahụmịhe dị egwu na-ede akwụkwọ ahụ. Kyle kwuru na ndị na-edezi akwụkwọ na-akwado, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-adị ngwa iji nweta ọdịnaya ya.
Dummies agbatịwo, na ntụnye ntanetị na ọbụlagodi Akwụkwọ akụkọ Dummies! Nwere ike ijide ha Twitter, Facebook na Youtube, kwa! Lelee saịtị ha - enwere TON nke ihe ebe ahụ. Achọtara m obere nkuzi nkuzi a Otu esi emepụta Facebook peeji maka azụmaahịa gị.
Gaa lelee Ugbo saịtị ma mee nyocha… ihe ị ga-ahụ ga-eju gị anya. Achọtara m ihe niile site n'inweta eriri karịa na nri gị na Surlanahụ Ọzara (ikekwe enwere ụfọdụ yitụrụ ebe ahụ!).
Tags: akpaaka ahịa ahịa akpaakaakwụ ụgwọ mgbasa ozindịseo mgbakeaghụghọ slideshareeziokwu mgbasa ozi
Sep 3, 2009 na 3: 36 AM
Nganga ịsị nwa m nwanyị bụ onye editọ Project na Wiley na nkewa a.
Septemba 3, 2009 na 2:48 ehihie
Ekwenyere Doug - na FYI M ka gụchara akwụkwọ Dummies a na-akpọ Facebook Marketing for Dummies nke ga-apụta na Ọkt 13 - http://www.amazon.com/Facebook-Marketing-Dummies-...
Septemba 3, 2009 na 5:31 ehihie
Nke ahụ bụ ọmarịcha ozi! Ekele! Ana m atụ anya ịhụ ya.
Septemba 3, 2009 na 3:18 ehihie
akụkọ mara mma. Agụrụ m ebook gị wee nweta ọtụtụ ndụmọdụ bara uru ebe ahụ. daalụ maka ịkekọrịta enyi m